Waxa la sameeyo ka dib rakibidda Deepin 15.4 | Laga soo bilaabo Linux
Waxa la sameeyo ka dib rakibidda Deepin 15.4
Natiijada baaritaanka Linux Deepin 15.4 Waxay ahayd wax ka badan qanacsanaan, distoor leh muuqaal muuqaal aad u wanaagsan, oo leh waxqabad la aqbali karo iyo codsiyo kala duwan oo guul leh oo lagu rakibay qaab ahaan. Hadda, in kasta oo ay xaqiiqda tahay in distro-ku uu diyaar u yahay inuu adeegsado isticmaale kasta, waxaan qaban karnaa xoogaa hami ah ka dib markii la rakibo Deepin 15.4 waanu arki doonaa marka xigta.
1 Maxaa ku cusub Deepin 15.4?
2 Tixgelinno qaar si loo tixgeliyo kahor intaan la bilaabin hagaha
3 Talaabooyinka la qaadayo ka dib marka la rakibo Deepin 15.4
3.1 Ku cusbooneysii bakhaarrada qotada dheer meelaha la aqbali karo ee bartaada juqraafi ahaan.
3.1.1 Cusboonaysii nidaamka iyo keydadka:
3.1.2 Ku rakib darawalada lahaanshaha:
3.1.3 Ku rakib Synaptic
3.1.4 U beddel luqadda wps
3.1.5 Ku rakib farriimaha daaqadaha:
3.1.6 Ka faa'iidayso inta badan dukaanka qoto dheer
Maxaa ku cusub Deepin 15.4?
Anigu shakhsi ahaan waan tixgeliyaa Dheeraad mid ka mid ah kuwa ugu fiican ee Shiinaha ee aan arkay muddo dheer, maaddaama ay leedahay muuqaalka ugu fiican ee muuqaalka maanta ah ee ay ogtahay sida loogu dhex daro waxqabadka wanaagsan iyo barnaamijka casriga ah. Sidoo kale, distoorku wuxuu ku yimaadaa qalab casri ah oo noo kontaroolaya taas oo noo oggolaan doonta inaan kala-saarno oo aan uqeybino distoorkeena doorbidkeena.
Kooxda hormarinta qotoda dheer waxay daryeeleen faahfaahin kasta oo ku saabsan tan cusub, ka soo qaadisteeda rakibida oo leh ogaanshaha caqliga, baaritaanka QR code iyo fariimaha ku saabsan hargabka. Sidoo kale, waxay ku dareen Linux kernel 4.9.8 distro-kan si loo helo taageero balaaran oo xagga qalabka ah.
Miisaanka qoto dheer ee 15.4 waa mid aad u fiican, oo leh astaamo deg deg deg deg ah, toolbar la qabsan karo, menu qaabeyn heer sare ah, iyo waxyaabo kale.
Waxaan kugula talineynaa inaad aragto qaar ka mid ah dib u eegista qotada dheer ee soo socota halka astaamaheeda iyo quruxda ay leedahay 'distro' ay tahay mid faahfaahsan.
Tixgelinno qaar si loo tixgeliyo kahor intaan la bilaabin hagaha
Deepin 15.4 Waa distro ku saleysan debian leh desktop caadiya, sidaa darteed inta badan codsiyada, tilmaamaha iyo tilmaamaha loogu talagalay loona sameeyay shaqadan distro ee qoto dheer.
Waxay kuxirantahay qalabkaaga, qaar kamid ah shaqooyinka qotada dheer ayaa laga yaabaa inaysan si sax ah ushaqeyn, xaaladaas fadlan soo sheeg.
Talooyinka aan hoos ku muujineyno waa in lagu fuliyaa halistaada, waa natiijada khibradeena iyo aqrinta khubarada kala duwan ee ku xeel dheer arrimaha.
Talaabooyinka la qaadayo ka dib marka la rakibo Deepin 15.4
Ku cusbooneysii bakhaarrada qotada dheer meelaha la aqbali karo ee bartaada juqraafi ahaan.
Tani waa tallaabo aan u arko inay lagama maarmaan tahay ka dib markaan si xeel dheer u rakibo maadama bakhaarrada ku shaqeeya firfircoonida ay aad uga gaabiyeen inta badan waddamada ka baxsan qaaradda Aasiya, waxaad isku dayi kartaa inaad u beddelatid mid ka mid ah keydadka ka muuqda liiska ee Deepin waxay na siisaa xulashooyinka cusbooneysiinta (waxaan kugula talinayaa midka ka yimaada Brazil), laakiin elav waxay sidoo kale wadaagtay liistada muraayadaha kale ee aad isticmaali karto iyo inaan hoos ku wadaago
Si aan ugu darno bakhaarradan waa inaan wax ka bedelno ilo.list si aan sidaas u yeelno, aan u fulino amarka soo socda: sudo nano /etc/apt/sources.list
America: Mareykanka, Mexico, Dominican Republic, Puerto Rico, iwm.
deynta ftp://mirror.jmu.edu/pub/deepin/ xasilloonida ugu weyn ee gacan ka geysashada deynta oo aan bilaash aheyn ftp://ftp.gtlib.gatech.edu/pub/deepin/ xasilloonida ugu weyn ee aan xasillooneyn oo deyn bilaash ah ftp: // muraayad .nexcess.net / deepin / xasilloonida ugu weyn waxay ku darsataa lacag la'aan
Spain iyo Yurub:
deynta ftp://deepin.ipacct.com/deepin/ xasilloonida ugu weyn ee gacan ka geysashada deynta aan lacag la'aanta lahayn ftp://mirror.bytemark.co.uk/linuxdeepin/deepin/ xasilloonida ugu weyn ee aan deynka lahayn oo lacag la'aan ah ftp: //mirror.inode .at / moolka / xasiloonida ugu weyn ee bilaa lacag la'aanta ah
deynta ftp://mirror.bytemark.co.uk/linuxdeepin/deepin/ xasillooni darrada ugu weyn ee bilaa lacag la'aanta ah ftp://ftp.mirrorservice.org/sites/packages.linuxdeepin.com/deepin/ xasilloonida ugu weyn ee aan bilaashka ahayn
deynta ftp://ftp.gwdg.de/pub/linux/linuxdeepin/ xasillooni darrada ugu weyn ee aan deynta lahayn ee ftp://mirror2.tuxinator.org/deepin/ xasilloonida ugu weyn ee aan xasillooneyn ee deynta aan lacag la'aanta ahayn ftp: //ftp.fau .de / deepin / xasillooni darrada ugu weyn ee aan lacag la'aanta ahayn
Cusboonaysii nidaamka iyo keydadka:
Aynu ka fulino amarka soo socda xarunteenna:
Waxaad sidoo kale ka sameyn kartaa isku xirnaanta qaabeynta, xulashada cusbooneysiinta nidaamka. Waxaad ka faa'iideysan kartaa oo aad oggolaan kartaa raadinta cusbooneysiinta otomaatiga ah.
Ku rakib darawalada lahaanshaha:
Waxaan badanaa u baahanahay darawalada lahaanshaha si markaa kumbuyuutarkeenu si fiican u shaqeeyo, markaa waxaan u rakibi karnaa sida soo socota, tan waxaan si fudud ugu fureynaa dalabka maamulaha darawalka ee qoto dheer ku rakibay asal ahaan, gali lambarkayaga sirta ah oo xulo darawalada la heli karo. kombiyuutarkayaga
Ku rakib Synaptic
In kasta oo suuqa loo yaqaan 'Deepin market' ay fududahay in la isticmaalo oo uu leeyahay codsiyo aad u tiro badan, haddana waxaan u arkaa in synaptic-ga uu yahay keyd codsi oo dhammaystiran sidaa darteed waxaan kugula talinayaa in la rakibo, tan awgeed waa ku filan tahay inaan soo dejino nooca gelinno 32 o gelinno 64 u dhiganta dhismahaaga oo rakib adigoo isticmaalaya gdebi, ama maareeye kale oo xirmo ah.
U beddel luqadda wps
Xirmada xafiiska ee si qoto dheer u keenaya waa wps, waa inaan ku badalnaa luuqada Isbaanishka si ay u aqbasho dhamaan astaamaha luuqadeena isla markaana hagaajiyaha si sax ah u shaqeeyo.
Si tan loo sameeyo, kaliya fur wps oo aad galka bidix ee sare halkaasoo aad kuheleyso ikhtiyaar sheegaya oraahda badala luqadda (badal luqadda), waxaan raadineynaa luqadda (ama lahjadda) aan rabno waana aqbalnaa, xirmada u dhiganta waa la soo dejinayaa oo luqadda ayaa isbedeleysa.
Ku rakib farriimaha daaqadaha:
Waxaan ku rakibi karnaa foomamka daaqadaha amarka soo socda
sudo apt-hel rakib ttf-mscorefonts-rakibiyaha ttf-bitstream-vera ttf-dejavu ttf-xoreynta ttf-freefont
Ka faa'iidayso inta badan dukaanka qoto dheer
Waxyaabaha qoto dheer leh waa dukaan aad u fiican, qurux badan, abaabulan, dhakhso leh, oo wata codsiyo aad u tiro badan isla markaana wata rakibid fudud, talo soo jeedintayda shaqsi ahaaneed ayaa ah inaan sida ugu wanaagsan uga faa iidaysanno dukaankan, innagoo raadineyna codsiyo aynaan aqoon, tijaabin ama rakibid codsiyada ugu isticmaalka badan.
Isbeddeladan yar yar waxaan ku yeelan doonnaa gunta waxyar oo habayn ah, haddii aan bilowno inaan wax ka beddelno waxyaabo kale, wax xaqiiq ah oo wax soo saar badan ayaa soo bixi doona.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Waxa la sameeyo ka dib rakibidda Deepin 15.4
Aad u fiican, aad u fiican !!
Waad salaaman tihiin. Waxaan heystaa dhibaato aanan awoodin inaan ku xalliyo Deepin 15.4, oo ah fiidiyowga la jeexjeexay, waxaan haystaa sawirro intel isku dhafan, waxaan rajeynayaa in qof i caawin karo, mahadsanid.
Waxaan qabaa isla dhibaatadaas oo aanan xallin karin
Tabobar aad u wanaagsan ayaa faa'iido u yeelan doona dadka ku cusub distoorka, laakiin waa inaan wax kuu caddeeyo taasna waa in Synaptic lagu daro dukaanka qoto dheer, waad ka raadin kartaa oo ka rakibi kartaa halkaas. Sidoo kale waxaa jira barnaamijyo badan oo kaliya laga helo synaptic.
Cusbooneysiinta keydadka ma aha inay adkaato sida ay ku sameyaan terminal, halkan waa xalka ugu fudud
ugu dambeyntii waxaan ka tagayaa fiidiyow sharxaya habka ugu fiican, maxaa la sameeyaa ka dib markaad rakibto qoto dheer?
iyo dib u eegista rasmiga ah ee qoto dheer 15.4
Waad ku mahadsantahay la shaqeynta qaybintaan Shiinaha, waxaan ka imid OpenSUSE 42.2 (KDE iyo Cinnamon) oo aniga i daaya maxaa yeelay aad buu u gaabiyaa mana adka. Xilligan la joogo, hadda la rakibay, Deepin si fiican ayuu u shaqeeyaa, laakiin si looga hortago inuu baxo markii la isticmaalayo "sudo apt-get update && apt-get upgrade":
E: Waan furi kari waayey faylka qufulka "/ var / lib / dpkg / lock" - furan (13: Ogolaanshaha waa la diiday)
E: Ma qufulli kari waayey galka maamulka (/ var / lib / dpkg /), adigu ma tahay superuser?
Waxaan adeegsaday: "sudo su" dhig furaheyga sirta ah kuna qor: "apt-get update && apt-get upgrade" isla markiina cusbooneysiintu wey bilaabmeysaa, dabcan markii ugu horeysay waxaan tagay Xarunta Xakamaynta (dhinaca midig ee hoose) halkaasna waxaan ka soo qaatay "Cusboonaysiinta / Cusboonaysii goobaha »Waxaan u beddelay muraayadda kan ugu dhaqsaha badan aaggayga.
Kadib markaad dhigto ilaha lahaanshaha waa inaad dhigtaa: sudo fc-cache
Khabiir ma ihi, kaliya waxaan xiiseynayaa GNU / Linux mar walbana waan jeclaa KDE, wax walba ayaan ka bartay maqaallada iyo casharrada sidaada oo kale.
Waxaad ubaahantahay inaad qeexdo sudo labada jeerba iyo apt-get muhiim kuma ahan sidoo kale apt. "Cusbooneysiinta Sudo apt && sudo apt upgrade"
Ku jawaab uzanto
Waad salaaman tihiin, cashar aad u wanaagsan, dhibaato ayaan qabaa, waxaan rakibayaa qoto dheer laakiin igama ogola inay keydiso ama tirtirto ntfs disks ama partitions, waxay quful saartaa mid kasta oo ka mid ah mana aqaano sida loo xaliyo dhibaatadan, jawaab ayaan sugayaa iminkana waa mahadsantahay . Farxad
Ku jawaab pipo
Darwiinnada torres dijo
Galab wanaagsan, isku day inaad ka saarto ikhtiyaarka bilawga degdegga ah xulashooyinka daaqadaha, dib ugu bilow qoto dheer iyo voila
Ku soo jawaab Darwins Torres
Haye, sidee tahay waxaan haystaa buuga cx oo wata i7 16gb wan oo wan iyo kaararka sawir gacmeedka intel hd oo lagu daray mid kale oo ka socda nvidia 940mx. Waan jeclahay Deepin 15.4 laakiin kuma xallin karo dhibaatada cusbooneysiinta iyada oo loo marayo GUI. Mar kasta oo ay weydiisato in dib loo bilaabo si loo cusbooneysiiyo, waan sameeyaa laakiin waxay siisaa daqiiqad ah 0% waxayna siisaa qalad, inkasta oo dib loo tijaabiyo waxay ku sii socotaa isla wax. Waxaan ku cusbooneysiiyay boosteejada. Msg-ga ayaa soo muuqanaya dhamaadka: 0 waa la cusbooneysiiyay, 0 cusub ayaa la rakibayaa, 0 si meesha looga saaro iyo 52 oo aan la cusbooneysiinin Khaladkan isku midka ah ayaa sida muuqata ii oggolaanayn inaan kala soo baxo oo aan ku rakibo codsiyada kale dukaanka, maaddaama ay iyaguna qalad bixiyaan. Meelaha la keydiyaa waa wadankeyga waxayna ku shaqeeyaan xawaareyda isku xirka 20mb ee caadiga ah. Sideen ku xallin karaa dhibaatadaas? Waxaan raadinayay oo raadinayay macluumaad ku saabsan laakiin waxaan ku cusubahay Linux wax walbana waa ka qaalisan yihiin laba jibbaar. Marka hore, aad baad ugu mahadsan tihiin tabarucaadkiina iyo waqtigiina. Farxad!
Jawaab Carlos Luciano Figueroa
Raac talaabooyinka si aad ugu badasho keydka rasmiga ah ee Beijing mid kuugu dhow wadankaaga
Marka laga reebo sameynta waxa uu yiri Darwin Torres, waxaa ku habboon in la rakibo apt-soon (Waxay u baahan tahay rakibidda aria2). Haddii aad u aragto inay aad u adag tahay inaad ku rakibto waxaas oo dhan terminaalka, waad soo dejisan kartaa .deb ee prozilla iyo apt-proz (In kasta oo ay waxyar ka gaabinayso). Barnaamijkani wuxuu kuu ogolaanayaa inaad xawaareyso tirada isku xirnaanta, adigoo soo dejinaya deg deg deg deg ah.
PS: Haddii aad go'aansato inaad rakibto apt-soon, waa inaad isticmaashaa buugga si aad ugu rakibto Debian, oo aan ahayn Ubuntu.
Balooggaagu wuu wanaagsan yahay laakiin waxaan rajaynayaa inaad ii soo sheegto sida qotodheer ee meelaha wax lagu keydiyo loo cusbooneysiiyo maxaa yeelay sudo add-apt-repository ppa: ma shaqeeyaan ama ma cusbooneysiinayaan.
Qaabeynta, qeybta cusbooneysiinta, liisaska muraayadaha ayaa kasoo muuqda oo aad ka dooran karto mid dalkaaga u dhow
Deepin kuma haboona ppa maadaama ay ku saleysan tahay Debian oo aysan aheyn Ubuntu. Laakiin waad ku rakibi kartaa xirmooyinkaas "Aptik", waxaad ka heli kartaa dukaanka Deepin, sharraxaadda waxay sheegaysaa inay kuu oggolaanayso inaad rakibto xirmooyinka barnaamijyada sida ppa.
Hagaag, waan isku dayay mana jiidan 🙁
Waad salaaman tihiin. Weydiinta qoto dheer ee 15.4 Ma haysto amar DEB ah oo la rakibay. Sideen ku rakibaa ???
Ku jawaab Carlos Flores
si aad u maamusho faylasha .DEB waa inaad ku rakibtaa gdebi
Waan ka xumahay dhibaato ayaa i haysata, waxaan rakibaa qoto dheer 15.4, waan cusbooneysiiyaa wax walba, laakiin markii uu dansan yahay iyo markii uu daarnaa, dekedda iyo launcher-ka ayaa laga saaray oo waan hagaajin kari waayey, waxaan u baahanahay caawimaad
Sida loo abuuro GIF-yada sawirrada Linux-ka ee qunsulka
Sida loo kala qaybiyo oo loogu biiro faylasha Linux